Khudradda Biyaha Biyaha WatercolorPNG
Khudaarta biyaha kuleylka ah PNG
Khudaarta cagaaran ee khudradda cagaaran iyo jaalaha ah PNG ayaa dejiya biyaha
Khudradda cagaaran ee cagaaran iyo jaalaha ah PNG biyo diirran oo khudradda cagaaran oo cagaar ah oo caleemo qoyan ku jira oo ah meel dhexdhexaad ah ...
Dejinta bocorka ah ee khudradda beeraha ee PNG
Cagaarka biyaha bataatiga ah ee loo yaqaan 'PNG khudradda' khudradda khudradda ah ee khudradda loo yaqaan "PNG" khudradda khudradda cagaarka ah ee qaabka diilinta biyaha ee 6.
Khudaarta abuurka beedka PNG ayaa dejiya biyaha
Khudaarta abuurka beedka PNG biyo-xireen khudaar cagaaran oo khudradda cagaaran ah ee qaabka biyaha laga soocayo ee 6 ...
Khudaarta eggplant Purple PNG biyo diiran
Khudaar bataatiga khudradda ah PNG Dejinta khudradda eggplant ka samaysan qaabka biyaha diineed oo xaddidan 7 ....
Khudaarta cagaaran ee casaanka ah PNG dejiyaha biyaha
Khudaar cagaaran oo casaan ah PNG Watercolor set khudaarta casaan gaaban ee qaabka biyaha diirran oo go'an oo 8 ah ....
Khudaarta khudradda cagaaran ee loo yaqaan "PNG"
Khudradda dabacdaanka ah ee liinta PNG waxay dejiyaan khudradda khudradda cagaaran ee qaabka biyaha ee 5. Aquarelle ...
Khudaarta cagaaran ee loo yaqaan PNG khudaarta
Khudaarta cagaaran ee khudradda Cagaarka biyaha PNG ayaa khudradda cagaaran ee khudradda loo yaqaan "watercolor" ah ee 4. Cagaarka Aquarelle ...
Khudaarta cagaaran ee bocorka ah PNG
Khudradda basal-biyoodka Biyaha PNG Khudaarta basasha ee qaabka biyaha diirran. Boorsooyinka Aquarelle ayaa loo yaqaan 'watercolor set of watercolor ...
Khudaarta cagaaran ee khudradda Cagaarka biyaha PNG
Khudaarta cagaaran ee khudradda Cagaarka biyaha PNG ayaa la dhigay caleenta cagaaran ee cagaaran ee Aquarelle oo ah 4. Maaddooyinka ladnaanta ee DIY, ...
Khudaarta cagaaran ee khudradda "PNG"
Khudaarta cagaaran ee khudradda leh PNG khudradda cagaaran khudaarta cagaarka ah ee qaabka biyaha laga soocayo ee 6. Aquarelle ...
Muujinaya: 1-10 10 ah
Waxaad baartaa beerta khudradda biyaha leh
Naqshadda Veggy waa mid ka mid ah kuwa ugu baahida badan! Waxaa jira sawirro biyo oo badan oo khudrado leh oo ku saabsan kaydka farshaxan ee kala duwan. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la helo sawirrada khudradda biyaha ku habboon. Waxaan ognahay xirfadaheena farshaxan ee xoogan iyo rabitaan aan rabno in la soo saaro naqshad casri ah oo soo jiidasho leh! Annaga oo naga helno wax fiican wax micnaheedu maahan marwalba marxaladda adag iyo waqti-qaadashada! Waxaan raadsaneynaa isbeddellada waawayn, dooro fannaaniinta xirfadlayaasha ah ee ugu khatarsan oo ku siiya qalabka biyaha la isku qurxiyo, oo diyaar u ah isticmaalka toosan ka dib markaad iibsato! Soo uruurintaan soo saarka waraaqaha biyaha lagu dhajiyo waa beer la yiraahdo noocyada farshaxanka ugu fiican!
Faa'iidooyinka caleenta biyahaygu waa kuwo hooseeya. Aan aragno waxa aad ka hesho shaqada nala soo xiriir:
Kala duwanaansho iyo awood u lahaanshaha inaad doorato noocyada iyo qaababka kala duwan waa sheyga dhabta ah ee adiga kugu habboon ee naqshadeeye. Waxaan leenahay farsamo la aqoonsan karo, taas oo ah mid aad u fiican! Farshaxannadayadu waxay abuuraan farshaxanka oo kaliya ma shaqeeyaan. Waxaanu kuugu jirnaa inaan ku siinno boodhadhka biyaha laga helo, oo ka hadlaya sida ay u weyn yihiin! Waxaa jira sawirro biyaha lagu dhajiyo khudradda laga yaabo in dhammaan dhirta ugu caansan ee dadku raadiyaan. Waxay noqon doonaan kuwo ku habboon badeecadaha dhijitaalka ah iyo daabacan ee la xiriira geedi socodka karinta, walxaha jikada, makhaayadaha iyo wixii la mid ah.
Saamaynta ugu wacan ee tayada, isku-duubnaanta, iyo qiimaha ayaa kugu farxi doona! Wax walbaa kuugu kalsoonaan karaa adiga oo ah naqshadeeye si aad u hesho sawirro tayo sare leh oo royalty-ka ah oo leh astaamo la yareeyay qiimo macquul ah. Waxaad haysataa fursado fara badan oo aan la socono! Daawooyinkan khudradda biyuhu waa kuwo sahlan oo degdeg ahna loo isticmaalo. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa uun inaad bixiso, soo dejiso, furto sawir leh barnaamijka, dooro kala soocida aad adigu u baahan tahay oo ku dhajiso meel kasta oo ay noqon lahayd. Waxaan kudhacnaa waxtarkaaga!
Farqiga u dhexeeya sawirrada biyaha ee khudradda iyo kuwa kale oo aan gaar aheyn ayaa la arki karaa. Waxaan kufaraxsanahay inaan awoodno inaanu ku qancinno baahidaada wax soo saar badan oo tayo sare leh oo kaa caawinaya inaad abuurto naqshad casri ah.